सनग्लास मर्मत विधि
सनग्लासहरू खरीद गरेपछि, धूप चश्माको मर्मतसम्भारमा ध्यान दिन विरलै हुनेहरू हुन्छन्। हुनसक्छ केही व्यक्तिहरू सोच्दछन् कि म यो गर्मीमा मात्र लगाउँछु, र धेरै व्यक्तिहरू सोच्छन् कि तिनीहरूले केवल धनी चश्मा किन्नुहोस् तर पराबैंगनी रे र फेसनबाट बचाउन। अन्य सनग्लासहरूको लागि, उनीहरू यसलाई विचार गर्दैनन् ...
कसरी आफ्नो अनुहार आकार को लागी चश्मा छान्ने
तपाईको अनुहारको लागि कस्तो खालको फ्रेम उत्तम हो भनेर पत्ता लगाउन कहिले समस्या भएको छ? ठिक छ तपाईं भाग्यमा हुनुहुन्छ! हाम्रो सानो गाईडको साथ तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ कि त्यहाँ सबैका लागि एक फ्रेम छ - र हामी तपाईंलाई भन्न सक्दछौं कि तपाईको लागि सबैभन्दा उत्तम फिट के हो! मेरो अनुहारको आकार कस्तो छ? यस्तो हुन सक्छ कि तपाईंसँग ...
Zhejiang Baolai समूह कं, लिमिटेड एक बड़े पैमाने पर निजी उद्यम एकीकृत चश्मा निर्माण, अनुसन्धान र विकास, उत्पादन, बिक्री, र आयात र माल निर्यात को एक एकीकृत छ। हाम्रो कम्पनीको परिवारको माथिल्लो भागमा तीन कारखानाहरू छन्, दुई स्टोरहरू बीचमा व्यापार शहरमा, एक विदेशी टी ...